Air Bagan | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
September 8, 2007, 3:38 pm
Air Bagan ရန်ကုန်-စင်္ကာပူ လေကြောင်းလိုင်းကို စက်တင်ဘာ (၇)ရက်နေ့က စတင်ပြီး စတင်ပျံသန်းနေပါပြီ .. ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေက စီးပွားရေးလွန်စွာ ကျပ်တည်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ဒီလူတွေလုပ်ရပ်က ပြည်သူတွေကို လုံးဝစာနာထောက်ထားခြင်း မရှိတာကို အံ့ဖွယ်ပါပဲရှင် .. ။ Air Bagan ကို အားမပေးကြဖို့ စင်္ကာပူရောက် မြန်မာတွေက သပိတ်မှောက်တယ်လို့ ကြားသိရတာ ကျေနပ်မိပါတယ် ။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ဆောင်တာတစ်ခုပါပဲ .. ။
နအဖရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တေဇစီးပွားရေးကို ကျေးဇူးပြုပြီး အားမပေးကြရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Silk Air လေကြောင်းလိုင်းကို စီးရခြင်းက ပိုမိုအဆင်ပြေသင့်လျော်သလို စိတ်ချရပါတယ် .. ။ Service ကအစ လုံးဝကွာခြားပါတယ် .. ။
ကျွန်မတို့မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေရင်းတွေကတော့ ပြန်ရင် နအဖအုပ်စုထဲကလူတွေ တည်ထောင်ထားတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းကို ဘယ်တော့မှ ရွေးချယ်ခြင်း မပြုကြပါဘူး . .။
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လွန်းတဲ့ အာဏာရှင်တွေ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ ၊ ပိုမိုအင်အားတောင့်လာဖို့ အားမပေးကြဖို့ လိုပါတယ် .. ။ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ရင်တောင် သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အားမပေးရင် ကူညီခြင်းတစ်မျိုးပါပဲရှင် .. ။
i want to photo about ,The death month !! may i see that photo ,can u?
Comment by Anonymous September 11, 2007 @ 3:27 pm
he who laughs …lasts!
Robert lows Stevenson wrote ‘ Anyone can live sweetly,patiently,lovingly,purely, till the sun goes down.’
it is remembering to say;’ i love you”. at least once each day.
Comment by nitikiti September 12, 2007 @ 8:09 am